LUNGISA IMALWAREBYTES AYIKWAZANGA UKUQHAGAMSHELA IMPAZAMO YENKONZO - ITHAMBILE
Lungisa iMalwarebytes Ayikwazanga ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo
Inkqubo ye-antivirus yenye yezinto zokuqala esizifaka kwikhompyutheni entsha, kwaye ngokufanelekileyo.Ngelixa abambalwa behlawula isixa esihle semali ukufumana inkqubo ye-antivirus ethembekileyo, uninzi lwethu luxhomekeke kwiinkqubo zasimahla ezifana neMalwarebytes kwiimfuno zethu zokhuseleko. Nangona simahla, I-Malwarebytes wenza umsebenzi obalaseleyo wokukhusela iinkqubo zethu kuhlaselo lwe-malware kunye nentsholongwane. I-Malwarebytes nayo inenguqulo ehlawulwayo (i-premium) evula iimpawu ezifana nezikena ezicwangcisiweyo, ukhuseleko lwexesha lokwenyani, njl.njl kodwa inguqulelo yasimahla yanele kubasebenzisi abaninzi. Jonga isikhokelo sethu kwi Uyisebenzisa njani iMalwarebytes Anti-Malware ukususa iMalware ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Nangona kunjalo, akukho nanye into kwihlabathi letekhnoloji engenazimpazamo kunye neengxaki. I-Malwarebytes ayohlukanga kwaye ingasebenzi kakuhle amaxesha ngamaxesha. Sele sigubungele enye yezona zinto zixhaphakileyo kwiMalwarebytes Real-Time uKhuseleko lweWebhu aluyi kuvula umcimbi, kwaye kweli nqaku, siza kugubungela omnye umba, I-Malwarebytes Ayikwazanga ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo.
Uyilungisa njani iMalwarebytes Ayikwazanga ukuqhagamshela impazamo yeNkonzo
Indlela yoku-1: Jonga imeko yeNkonzo yeMalwarebytes
Indlela yesi-2: Yongeza i-Malwarebytes kuluhlu lwakho lwe-Antivirus ngaphandle
Indlela yesi-3: Faka kwakhona iMalwarebytes
Indlela yesi-4: Khipha iMalwarebytes kwiMowudi eKhuselekileyo
Impazamo yenzeka xa ucofa kwi icon yesicelo ukuyivula, kodwa endaweni yokuqalisa, ubona isangqa esiluhlaza esijikelezayo silandelwa ngumyalezo wemposiso. Impazamo ithintela umsebenzisi ekubeni aqalise iMalwarebytes kwaphela kwaye inokucaphukisa ukuba ufuna ukuskena ikhompyuter yakho kwangoko. I-Malware .
Njengoko umyalezo usitsho, impazamo ibangelwa ikakhulu ngenxa yeengxaki ezithile ngenkonzo yeMalwarebytes. Ezinye izizathu zempazamo ziquka i-bug yangaphakathi kuguqulelo lwangoku lweMalwarebytes, ukungqubana nezinye iinkqubo ze-antivirus onokuthi uzifakile kwinkqubo yakho, iimpazamo zofakelo, njl.
Apha ngezantsi kukho zonke izisombululo ezixelwe ukusombulula i-Malwarebytes 'Ayikwazi ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo.
Njengoninzi lwezicelo, iMalwarebytes nayo inenkonzo yangasemva ehambelana nayo enceda ekusebenzeni kwayo. Ngokomyalezo wempazamo, i-Malwarebytes ayikwazi ukuqalisa ngenxa yonxibelelwano olungalunganga okanye iingxaki zonxibelelwano kunye nenkonzo. Oku kwenzeka xa inkonzo ye-Malwarebytes iyekile ukusebenza ngasemva ngenxa yesizathu esingaziwayo.
Isisombululo sokuqala ukuba Sombulula uninzi lweempazamo zeMalwarebytes kukujonga ubume benkonzo yeMalwarebytes. Ukunqanda naziphi na iingxaki, inkonzo kufuneka iqale ngokuzenzekelayo kuyo yonke inkqubo yokuqalisa; landela le miyalelo ingezantsi ukutshintsha uhlobo lwayo lokuqalisa ukuba ayenzi:
1. Vula iWindows Iinkonzo isicelo ngokuchwetheza iinkonzo.msc kwibhokisi yomyalelo wokubaleka ( Isitshixo seWindows + R ) kwaye emva koko ucofe Lungile. Ungafikelela kwiiNkonzo ngokujonga ngqo kwibar yokukhangela yeWindows (iWindows key + S).
2. Dlula kuluhlu lweeNkonzo zeNdawo kwaye ukhangele i Inkonzo yeMalwarebytes . Ukwenza ukhangelo lwenkonzo efunekayo lula, cofa kwi Gama phezulu kwefestile kwaye uhlele zonke iinkonzo ngokwealfabhethi.
3. Cofa ekunene kwiNkonzo yeMalwarebytes kwaye ukhethe Iipropati ukusuka kwimenu yentsingiselo elandelayo. (Kungenjalo, cofa kabini kwinkonzo ukufikelela kwiipropati zayo)
4. Phantsi kwe Ngokubanzi tab, cofa kwimenyu eyehlayo ecaleni kohlobo lokuQalisa kwaye ukhethe Iyazenzekela .
5. Okulandelayo, khangela ubume beNkonzo. Ukuba iyafunda Ukubaleka, cofa ku Faka ukugcina utshintsho kwaye u-Kulungile ukuphuma. Nangona kunjalo, ukuba umboniso weSimo seNkonzo uyekile, cofa kwi Qala iqhosha ngaphantsi ukuqalisa inkonzo.
Abasebenzisi abambalwa baya kufumana umyalezo wempazamo xa bezama ukuqalisa inkonzo yeMalwarebytes. Umyalezo wemposiso uzakufundeka:
IiWindows azikwazanga ukuqalisa inkonzo yeZiko loKhuseleko kwiKhompyutha yeNdawo. Imposiso 1079: I-akhawunti ekhankanyiweyo kule nkonzo yahlukile kwi-akhawunti echazwe kwezinye iinkonzo eziqhuba kwinkqubo efanayo.
Ukusombulula le mpazamo ingentla kwaye uqalise inkonzo ye-Malwarebytes, landela la manyathelo angezantsi:
1. Vula i Iipropati zefestile yeNkonzo yeMalwarebytes kwakhona (Amanyathelo 1 ukuya ku-3 ale ndlela ingasentla) kwaye utshintshele kwi Ngena ithebhu.
2. Cofa kwi Khangela iqhosha. Ukuba iqhosha lenziwe ngwevu, cofa kwiqhosha lerediyo ecaleni kwayo Le akhawunti ukuyivumela.
3. Faka eyakho Igama leKhompyutha (igama lomsebenzisi) kwibhokisi yokubhaliweyo phantsi 'Faka igama lento oza kuyikhetha' kwaye ucofe ku Khangela Amagama iqhosha ekunene. Igama lekhompyuter yakho liza kuqinisekiswa kwimizuzwana embalwa.
Phawula: Ukuba awulazi igama lakho lomsebenzisi nqakraza kwi Iqhosha eliphezulu , emva koko ucofe ku Fumana Ngoku . Khetha igama lakho lomsebenzisi kuluhlu kwaye ucofe u-Kulungile.
4. Cofa apha, Kulungile . Abasebenzisi abaseta igama eliyimfihlo baya kucelwa ukuba balifake. Faka nje igama eliyimfihlo ukuze ugqibezele.
5. Yiya emva kwi-General tab kunye Qala inkonzo yeMalwarebytes.
Qala kwakhona ikhompyuter yakho ngethamsanqa kwaye uvule i-Malwarebytes ukujonga ukuba ifayile Ayikwazanga ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo iye yasonjululwa.
Abasebenzisi abaninzi badibanisa iinkqubo zabo ze-antivirus ezikhoyo kunye ne-Malwarebytes yokongeza umaleko wokhuseleko. Nangona oku kubonakala ngathi isicwangciso esihle ephepheni, kukho izinto ezimbalwa ezinokuhamba kakubi. Okokuqala, iAntivirus kunye neenkqubo zeAntimalware zidume ngokugrumba izixhobo ezininzi (inkumbulo) kwaye ukuba nezimbini kuzo zisebenze ngexesha elinye kunokukhokelela kwiingxaki ezinzima zokusebenza. Okwesibini, ekubeni ezi zicelo zenza imisebenzi efanayo, ingxabano inokuvela, ibangele imiba ekusebenzeni kwayo.
I-Malwarebytes iye yabhengezwa ukuba idlala kakuhle kunye nezinye iinkqubo ze-Antivirus, kodwa abasebenzisi baqhubeka bexela iimpazamo ngenxa yengxabano phakathi kwezi zibini. Imiba iye yaxelwa ikakhulu ngabasebenzisi be-F-Secure, inkqubo ye-antivirus.
Ungasombulula le ngxabano ngokulula Ukongeza i-Malwarebytes kuluhlu okanye ngaphandle kwe-antivirus yakho . Inkqubo yokongeza isicelo kuluhlu olukhethekileyo lukhethekile kwisoftware ye-antivirus kwaye inokufunyanwa ngokwenza ukukhangela okulula kukaGoogle. Unokukhetha ukwenza njalo khubaza okwethutyana i-antivirus xa ufuna ukwenza iskena se-malware.
Abanye abasebenzisi baya kuqhubeka befumana impazamo nasemva kokutshintsha uhlobo lokuqalisa lweNkonzo yeMalwarebytes. Aba basebenzisi banokuzama ukubuyisela iMalwarebytes ngokupheleleyo ukusombulula ukungakwazi ukudibanisa imposiso yenkonzo ngokusisigxina.
Abantu abasebenzisa uguqulelo lwasimahla lwenkqubo ye-Anti-malware banokutsibela ngqo kwinkqubo yokufakwa kwakhona ngokukhupha isicelo kwaye emva koko bakhuphele kwaye bafake inguqulelo yamva nje yeMalwarebytes. Nangona kunjalo, abasebenzisi beprimiyamu baya kufuna kuqala ukufumana kwakhona ii-ID zokuvula kunye namaqhosha okudlula ukuze ukonwabele iimpawu zabo zeprimiyamu ekufakweni kwakhona.
Umntu unokufumana i-ID yokuvula kunye nesitshixo ngokujonga irisithi kwiakhawunti yabo ye-Malwarebytes okanye kwi-imeyile ayifumene emva kokuthenga iprimiyamu yokwakha yesicelo. Unokufumana nokubamba iziqinisekiso ngomhleli werejista yeWindows.
Ukufumana kwakhona i-ID yokuvula kunye nesitshixo seakhawunti yakho yeprimiyamu yeMalwarebytes:
1. Vula i Yenza ibhokisi yomyalelo ( Isitshixo seWindows + R ), uhlobo regedit kwibhokisi yokubhaliweyo, kwaye ucinezele u-enter ukuvula i-Windows Registry Editor. Ngokufana neeNkonzo, unokukhangela nje uMhleli weRegistry kwibar yokukhangela yeWindows.
Nokuba yeyiphi indlela yofikelelo, i-akhawunti yomsebenzisi ilawula i-pop-up ebuza ukuba uyafuna na ukuyivumela i-app ukuba yenze utshintsho kwisixhobo sakho iya kuvela. Cofa apha Ewe ukunika iimvume ezifunekayo.
2. Yandisa HKEY_LOCAL_MACHINE ekhoyo kwiqela lasekhohlo.
3. Okulandelayo, cofa kabini apha SOFTWARE ukuyandisa.
4. Ngokuxhomekeke kuyilo lwenkqubo yakho, uya kufumana i-ID yakho yokuvula kunye nesitshixo kwiindawo ezahlukeneyo:
Ngeenguqulelo ze-32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMalwarebytes
Ngeenguqulelo ze-64-bit: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMalwarebytes
Ngoku ekubeni sibuyise i-ID yokuvula kunye nesitshixo seakhawunti yakho yeprimiyamu yeMalwarebytes, singaqhubela phambili kwinkqubo yokukhupha:
1. Ngaphambi kokuba sikhuphe, vula iMalwarebytes ngokucofa kabini kwi icon yedesktop kwaye ucofe kuyo I-akhawunti yam ke ngoku Vala ukusebenza .
2. Okulandelayo,vula Imimiselo yoKhuseleko oluPhezulu kwaye susa uqwalaselo ibhokisi ecaleni 'Vumela imodyuli yokuzikhusela'.
3. Senziwe ngenkqubo yokukhupha kwangaphambili. Vala usetyenziso kwaye ucofe ekunene kwi icon yeMalwarebytes kwitreyi yenkqubo yakho kwaye ukhethe Vala.
4. Cofa kwi-hyperlink elandelayo I-MBAM-Clean.exe ukukhuphela isixhobo esisemthethweni sokukhupha.
5. Ukuze ulumke ngakumbi kwaye uthintele nakuphi na ukonakala okwenzekayo, vala zonke iinkqubo ezisebenzayo ngoku kwaye uvale okwethutyana i-antivirus yakho.
6.Ngoku, vula isixhobo se-MBAM-Coca kunye fshiya imiyalelo ekwisikrini/ukwazisa ukuba susa wonke umkhondo weMalwarebytes kwikhompyuter yakho.
7. Nje ukuba inkqubo yokukhupha igqityiwe, uya kucelwa ukuba wenze njalo qala kwakhona iPC yakho . Thobela isicelo kwaye uqalise kwakhona (Yiya kwi-desktop yakho, cofa i-Alt + F4 ilandelwa lutolo olujonge ezantsi, emva koko ungene).
8. Vula isikhangeli sakho osithandayo, uye ngapha I-Malwarebytes Cybersecurity ,kwaye ukhuphele uguqulelo olukhoyo lwamva nje lwenkqubo yokhuseleko.
9. Nje ukuba ukhutshelwe, cofa kwi MBSetup.exe kwaye ulandele imiyalelo kwi faka iMalwarebytes kwakhona, Xa ubuzwa susa ukukhangela ibhokisi ecaleni koLingo.
10. Qalisa isicelo kwaye nqakraza kwi Vula ilayisenisi iqhosha.
11. Kwisikrini esilandelayo, ngononophelo ngenisa i-ID yakho yokuvula kunye neqhosha lokugqitha sibuyise kwangethuba ukuze uvule ilayisenisi yakho yeprimiyamu.
Ukuba iingcambu zempazamo zinzulu kunokuba sibona, uya kuba neengxaki zokulandela isikhokelo esingasentla kunye Ukhupha ngokufanelekileyo usetyenziso lweMalwarebytes . Aba basebenzisi baneshwa kuya kufuneka kuqala qalisa kwiNdlela eKhuselekileyo kwaye ke ukhuphe inkqubo. Ukuqalisa kwiNdlela eKhuselekileyo:
1. Uhlobo MSconfig nokuba yi Run umyalelo ibhokisi okanye iiwindow bar yokukhangela kwaye cinezela ngenisa.
2. Tshintshela kwi Qala isithuba sefestile elandelayo.
3. Phantsi kweenketho zokuQalisa, khangela/phawula ibhokisi ecaleni kwe Safe boot .
4. Nje ukuba wenze iSafe boot, iinketho ezingaphantsi kwayo nazo ziyakuvulelwa ukukhetha. Khangela ibhokisi ecaleni kwe Ubuncinci .
5. Cofa apha Faka isicelo ilandelwe ngu Kulungile ukugcina uhlengahlengiso kwaye uqalise kwakhona ikhompyuter yakho ukuze ufake iMowudi eKhuselekileyo.
6. Nje ukuba iibhutsi zekhompyuter zibuyele kwiMowudi eKhuselekileyo, vula Iisetingi zeWindows ngokucofa iqhosha lokuQalisa kwaye emva koko i-icon yeSeto lwe-cogwheel (ngaphezulu kweenketho zaMandla) okanye usebenzisa indibaniselwano yebhodi yezitshixo yeWindows + I.
7. Cofa apha Usetyenziso .
8. Skena uluhlu lwee-Apps kunye neempawu ze-Malwarebytes kwaye ucofe kuyo ukwandisa iinketho zosetyenziso ngokwahlukeneyo.
9. Cofa kwi Khipha iqhosha ukuyisusa.
10.Awuyi kukwazi ukufikelela kwi-intanethi kwaye, ngenxa yoko awuyi kukwazi ukukhuphela ifayile yokufakela uguqulelo lwamva nje lweMalwarebytes kwiMowudi eKhuselekileyo. Ke buyela emva kwi-Boot tab ye-MSConfig window (amanyathelo 1 ukuya ku-3) kunye Susa ukukhangela/ukhuphe ibhokisi ecaleni kwe Safe boot .
Nje ukuba ikhompyuter yakho ibuyele ngokuqhelekileyo, ndwendwela Iwebhusayithi esemthethweni yeMalwarebytes kwaye ukhuphele ifayile ye.exe yenkqubo, faka isicelo kwaye awuyi kuyifumana Ayikwazanga ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo kwakhona.
Yintoni iMowudi yaMaqela kaMicrosoft?
Lungisa Ingxaki yenzekile kwiskena sosongelo se-BitDefender
Ukuba sele uqalile ukufumana iMalwarebytes Ayikwazanga ukuQhagamshela impazamo yeNkonzo emva kokuhlaziya kuguqulelo oluthile lweMalwarebytes, impazamo inokubangelwe ngenxa yempazamo ekhoyo kulwakhiwo. Ukuba kunjalo kwaye akukho nanye kwezi ndlela zingasentla ezisombulule umba, kuya kufuneka ulinde ukuba abaphuhlisi bakhuphe inguqulelo entsha kunye ne-bug elungisiweyo. Ungasoloko uqhagamshelana ne Iqela letekhnoloji yeMalwarebytes ngenkxaso okanye uqhagamshelane nathi kwicandelo lezimvo.